HORDHAC: Juventus v AC Milan, Finalka Supercoppa Italia – Gool FM
HORDHAC: Juventus v AC Milan, Finalka Supercoppa Italia
CR Shariif January 16, 2019
( Jeddah ) 16 Jan 2019. Juventus iyo AC Milan ayaa isaga hor imaan doona koobka Finalka ee Suprecoppa Italia.
Bianconeri ayaa ku guuleysatay Coppa Italia kaddib markii ay garaaceen AC Milan Laakiin guuldarro ayay la kulmeen labadii Finaalka ee Koobkan ugu dambeysay.
Tartanka: Supercoppa Italia
Garsooraha: Luca Banti
Garoonka: King Abdullah Sports City
Massimiliano Allegri ayaa heysta daafac yari, laakiin wuxuu awoodi doonaa inuu seddax dambe ka doorbiyo afartiisa daafac.
Mario Mandzukic ayaa sido kale la heli Karin, waxay taas la micno tahay in malaha Douglas Costa uu kusoo bilaabanayo garabka weerarka kaddib bandhig wanaagsan uu muujiyay cayaartii Coppa Italia.
Paulo Dybala iyo Cristiano Ronaldo ayay suuragal tahay iney dhameystiraan weerarka seddaxda hore, iyadoo Federico Bernardeschi uu seegayo kulankan.
Gonzalo Higuaín oo amaah kaga soo tagay Juventus isagoo ku biiray AC Milan, ayaa sheegay in diyaar uu u yahay inuu dhaqaaqo Chelsea. Inkastoo shaki la galinayo mustaqbalkiisa, balse waxaa la filayaa inuu cayaaro dheeshan.
Suso ayaa ganaax ku maqan, sidaa darteed Milan ayay u badan tahay iney ku dhibtoodana iney abuuraan fursad gooldhaline.
Sababtan darteed, Paquetá ayaa laga yabaa inuu markale kusoo bilaawdo shaxda kaddib markii uu kulankiisii ugu horreeyay saftay cayaartii Coppa Italia ay wajaheen Sampdoria.
Juventus ayaa badisay labadii kulan ee kooxahan is wajaheen xagaagan, waxaana kamida cayaar 3-1 ay ku badisay Bianconeri markii labada koox ay ku kulmeen Turin bishii March ee sanadkii hore.
Rossoneri ayaa ku guuleysan horyaalka tan iyo 2011 iyagoo sameeyay taariikh weyn markii ay gareen finalka Coppa Italia 16-kaddib iyagoo wareega afar dhammaadka 6-3 wadar gooleed ah kaga soo baxay Roma.
Manchester United oo Baraha Bulshada ka Bilaawday Tartankan Qosol leh Kaddib markii ay soo Bandhigtay SAWIRRADA Pogba Matic iyo Valencia Toban sano ka hor…Xitaa SOMAALI ayaa ku Biirtay Loolankaa